STREET KOOXDA Ian Erix: Site Official
Waxaan nahay Team Official Street ee Ian Erix. Waxaan nahay isku dhaf ah oo dalal kala duwan, diimaha, jinsiyadaha, jinsi, da 'iyo sexualities. Waxaan nahay isku dar ah hababka badan oo kala duwan, shakhsiyaad badan oo kala duwan, dhaqamo badan oo kala duwan iyo fikrado badan oo kala duwan. Waxaan nahay mutts. Wadajir, Waxaannu nahay dhaq-. Waxaan nahay MUTT ciidan oo aynu nahay dhammaan askarta. Waxaan aaminsan nahay in freethinking, hadal is oo xiiso leh qabo. Waxaan ku midoobeen hoos yimaada jacaylka leenahay music iyo naga soo laabadka wax kasta Ian Erix!!!
Haddii aad rabto in aad wax dheeraad ah oo ku saabsan Ian Erix ogahay, riix halkan. (Laakiin waxa aan tiradooda, haddii aad taas uga dhigay ilaa hadda, aad hore u ogaato waxa aad u baahan tahay inaad ka ogaato Ian si waxaad iska indhatiri kartaa link in!). Si aad ula xiriirto dadka laga cabsado oo la caawino iyo maareeyo tan kooxda jidadka caalamiga, email u soo dir: teams@ianerix.com
Erayga ku saabsan Ian Erix faafinta adduunka iyo caalamka oo dhan! (Sidaas in fursad off in aad taabato wax kasta oo Martians ama dadkuba waxay kale oo dheeraad ah-geenayaa, waa in aad u sheegtaa sida badan aad galay Ian Erix, waxa kaliya wax ka mid ah si uu idiin badbaadiyo ka noqdo mawduuca diidan ee tijaabo shisheeye waxaa laga yaabaa in!).
Ma waxaad raadineysaa macnaha nolosha? Sorry, biiro kooxda wadada this laga yaabaa in aanay kala dhantaalo dhan waxa qarsoon ee dunidu way idin laakiin waxa aad heli doontaa helitaanka gaarka ah si ay news Ian Erix iyo macluumaad ka hor inta qof kasta oo kale oo caalamka ku. Waxa kale oo aad heli doontaa fursad ay ku kulmaan Ian iyo qayb ka mid ah ka ambabaxay shakhsi noqday markii uu booqasho ku magaalo aad booqasho ku. More, waxaad ka heli inuu tago on wadada la Ian muddo sannad ah iyo lacag hal milyan oo doolar. Well, Okay, xukun in la soo dhaafay run ma aha ... annaga riyoodaan, waxaan karin?!!
Join Team Street
Fadlan qor laba lambar kasta * Tusaale: 12
Sanduuqa waxa loogu talogalay ilaalinta spam - fadlan dhaaf iyada oo bannaan:
Kulmin Free iyo salaamo baas ee Ian Erix muujinaysaa markuu yimaado maalintaas in aad magaalada.
Dareenka sharaf ah oo og in aad ka caawiyay Ian Erix ku guulaysto uu qorshe u saldanad adduunka.
Macluumaad Up-ka-taariikh ku saabsan meesha adduunka ugu Ian Erix waa.
Tikidhada Concert Free hogaamiyayaasha kooxda jidadka sare.
Hadiyado kale cabsi iyo abaal-marinno
SIDEE waxaad saxiixi kartaa ?
Haddii aad rabto in aad ku biiro Kooxda Official Street ee Ian Erix oo noqday a Mutt Ciidamada Askariga, isticmaal foomka is kor ku xusan in ay galaan macluumaadkaaga ama idinku soo diro fariin via email kula line mawduuca "biir Army Mutt ah" oo noo sheeg magacaaga oo buuxa, faahfaahinta xiriirka iyo magaalo, magaalada iyo / ama dalka aad jeceshahay si ay u matalaan. Waa in aad email u dir: teams@ianerix.com. FIIRO GAAR AH : Waxaad sidoo kale abuuri kartaa, kor iyo saldhigga kooxda wadada u gaar ah, taageere page, iyo / ama koox on site kasta oo aad doorato sida Facebook, Twitter, Tumblr, Pinterest, Buzznet, Bebo, Hi5 iwm.
Sidee ku heli kartaa A KOOXDA JIDKA DEEGAANKA EE Ian ERIX?
U dir email ah la line maaddada "Hel Kooxda A" si ay u teams@ianerix.com iyo in la hubiyo in ay ka mid magaca magaalada iyo wadanka aad. Ayaynu ku soo noqon si aad u sida ugu dhakhsaha badan leh macluumaadka ee ku jira kooxda ugu dhow meesha aad.
MAXAAD SAMAYN kooxaha JIDKA BEST SAMAYN?
1. Sida rasmiga ah ee Ian Erix / Mutt Army page on Facebook. www.facebook.com/ianerix.muttarmy
2. Connect with Ian Erix on dhan profiles network bulshada sida Facebook, Twitter, Yimaado, Instagram iwm.
3. Ku dar waxyaabo muujinaya Ian Erix in aad profile. (sudhaynaa, pictures, videos, aad jeceshahay Ian Erix song, magiciisiina wuxuu u liiskaaga music jecel, etc.etc.)
4. U dir Tweets ama fariimaha xaaladda post on Facebook ama sawiro ku Instagram waxay ku yidhaahdeen sida laga cabsado uu yahay ama u sheegaan qof kasta in ay isaga hubi oo post markii uu ku imaanayo magaalada kuu dhow.
5. Ku qor ugu yaraan 1 (laakiin doorbidan wax badan) of boodhadh / xilagaas ay hareeraha magaalada si kor loogu Ian Erix. Meelo fiican in la sameeyo tan waa in goobaha music maxalliga ah, suuqa ama bakhaarada dhar qabow, dukaamada qaxwada, Dugsiyada, looxaanta wararka, iwm.
6. U sheeg ugu yaraan 3 saaxibadaa inay ku xirmaan Ian Erix on Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Canabka ah, iyo / ama bogagga kale ee network bulshada uu -; loo hubiyo in ay si dhab ah ku raaxaystaan ​​oo sanqadhiisana. Haddii aad runtii doonayaa inaan tago fogaanshaha, xor u sheegto dhammaan saaxiibada aad ku darto Ian. Markaasaa hey, xor u sheegto dadka aan saaxiibadaa aad haddii aad u malaynayso in ay jecel yihiin waxaa laga yaabaa in Ian.
7. Watch Ian Erix ee videos cusub on YouTube oo u dooda videos ay u dhan saaxiibadaa iyo ka codso inay daawadaan.
8. Add music Ian Erix in aad iPod ama ciyaaryahan kale Mp3 jiid saaxiibkaa ';s qalab dhegaysi jecel iyo ku daro Ian ee music gal ay playlist aad! Waxaad ka iTunes soo dejisan kartaa heeso, Amazon ama si toos ah uga websites Ian Erix iyo ugu dhakhsaha badan ee aad ka hor-si karo album cusub ka www.ianerix.com
9. Haddii Ian Erix timaado in aad magaalada u dhaw inay ka ciyaari show ama taxane uu TV toogtaan, tagaan goobta oo ha ammaanka ogahay waa Hogaamiyaha aad Street ah si ay kor aad sameyn kartaa qaar ka mid ah dhaaf macaan. Oo haddii aad tahay super nasiib, aad xitaa si aad u saarin la Ian hor show ah!!!
10.Rux qaar ka baayacmushtarkaagii Ian Erix sida TEE qabow ama hoodie iyo markii qof walba aad amaanaa aad ka dhisan, ha ogaado oo ku saabsan Ian Erix. Merch cusub Awesome laga heli doonaa dhakhsaha badan ee www.ianerix.com
11. Qorid ama ay barbaro ka ";sagaalaad "; logo iyo erayada "Hubi Out Ian Erix" galeen kasta / meelaha writeable indent-awoodo sida miiska aad shaqada dugsiga ama shamiinto qoyan ku maraan oo dhawaan laami ah.
12. Ku qor "Waxaan jeclaan Ian Erix!"In ay calaamadeysanayaan madow sharpie guud ahaan jirkaaga qaawan oo isku xigta iyada oo dad badan oo ka dhacay suuqa ama dugsiga kulan ah.
13. Samee dhowr kun oo xilagaas Ian Erix iyo qanciyo tijaabo ah helicopter deegaanka si ay ugu duulaan badan degaankaaga badhtamaha magaalada ugu mashquulka badan iyo hoos u xilagaas ay hoos waqti peak.
14. Hel megaphone ah iyo bilowdo iskasoo "Ian Erich" riwaayada ka baxsan, idaacadaha, bandhigyada abaalmarinta ama shabakadaha TV meesha Ian Erix aan la ciyaaro, laakiin waa in.
15. Hel tattoo ku meel gaar ah oo leh magaca "Ian Erix" on your message foodda iyo qoraalka sawir ah naftaada soo bandhigeen aad gudaa cusub in dhammaan xiriirrada ku yaalla buugga cinwaanka telefoonka gacanta. *Fiiro: Hawlaha Team Street waa in la qabtaa si ka fekerid kaliya ee xubin kasta oo gaar ah wadada kooxda. Isticmaal xukun fiican sababtoo ah inkastoo Ian Erix aad jeclaan doono, waayo,, waxaa jira fursad ma noqon doonto inuu aanu inay yimaadaan oo damiinasho ka mid ah xabsi ama bixin enternetka ee wax farshaxanka jirka joogto ah awoodaan.
Yaa maamula kooxda wadada this?
Dhanka kale, taageerayaasha Ian Erix sida naftaada kula xoogaa gargaar ah ka ah publicist ama laba ee shirkadda maamulka Ian Erix ee.
Waxaan la xidhiidhi kartaa Ian Erix marayo halkan?
Waxaan isku dayi doonaa inaan soo gudbino qodobo warbixin kasta, taageere farshaxanka ama ammaan laga yaabaa in aad leedahay ee Ian, laakiin haddii aad rabto in aad si toos ah isaga soo xiriir iyo malaha jawaabta ka helaan, tago a comment ama isaga diraya fariin on Facebook ama Twitter malaha waa habka ugu wanaagsan in la tago.
Waa maxay Team a Street?
Kooxda wadada A waxa uu ka kooban koox ka mid ah taageerayaasha koox ama artist gaar ah, haddii ay taasi ku, Ian Erix, in ay caawiyaan hirgalinta iyo u bandhigan dad badan gudahood aad magaalada u gaar ah, magaalada, gobol ama wadan. Tani waxaa lagu gaari karaa iyadoo u qaybisay warqado loogu show ah ee soo socda, xiriiraya TV-yada iyo idaacadaha iyo codsanaya Ian Erix, helitaanka majaladaha music maxaliga ah si ay u eegaan inuu music ...; iwm.
Ma leedahay ah E-Team?
Yup. Waxaan jiid waajib double sida la-koox e oo ka filaynaa dhammaan xubnaha si kor loogu Ian Erix online. Waxaad ku caawin kartaa dhajinta banner ah, Warsidaha, ciyaaryahan music aad profile xirka bulshada, iwm. Sidoo kale, adigoo booqanaya forums music, qolalka chat, isagoo intaa ku daray ah lyric Ian Erix ama icon barnaamijka IM ama forum iyo email saxiixyada, diraysay Ian Erix xiriir la xiriira in ay saaxiibo, qaybinta e-cards iwm. Suurtogal ah aan dhamaadka lahayn. Noqo qof hal abuur leh, laakiin xusuusnow, cidina ma rabto spammer ah.
Ma kharash xubin ka mid ah kooxda Street noqday?
Nope, waxba! Xubinimada gebi ahaanba LACAG LA'AAN! Waxa kaliya ee waxay ku kacaysaa yara ee aad waqti iyo cibaadadana waa.
My magaalada / degaanka / wadanka hore u leedahay koox waddo. Weli waxaan ku biiri karaa?
Absolutely. Waxaan u baahanahay taageero dhan aan ka heli kartaa. Waxaan aad u soo bandhigo doonaa in kooxda wadada hogaamiyaha / s kale oo aad la wadaagi karto xiiso leh ee kor u qaadida Ian Erix ee magaalada.
Aad weli aadan hubin waxa la sameeyo si kor loogu qaado? Waa kuwan talooyin!
Waxaad bilaabi kartaa adigoo ka saaxiibadaa si loo hubiyo baxay Ian Erix ka dibna halkaas ka soo tagto. Ereyga horumarinta afka weli yahay ilaha waaweyn si ay u helaan dadka inay dhagaystaan ​​Ian ee music.
Post on Ian ee bogga shabakada bulshada iyo in forums music ama wax bogagga Ian Erix la xiriira iyo / ama in kasta oo kooxaha kale ama profiles in dadka lagu war aad ku abuureen koox ee degaankaaga. Ama haddii kale, si fudud boostada ku saabsan awesomeness waa in Ian Erix on your shabakad bulsho iyo bogga iyo / ama wax kale bogga shabakada bulshada, koox ama blog laga yaabaa in aad leedahay iyo post in kasta oo madasha internetka ee kale.
Daawo videos music uu on YouTube iyo boostada links-ka saaxibadaa arkaan. Tell your friends to watch his videos, subscribe to his YouTube page, follow him on Twitter, Instagram, Vine and/or like his official Facebook page!
Waxa kale oo aad ka raadin kartaa adigoo u sii maraya shabakada bulshada ee dadka ee gobolka / deegaanka / magaalada oo saaxiib ah oo u codsato haddii aad u malaynayso in ay hubiso in ka Ian Erix oo ku biiro kooxda aad wadada.
Print baxay warqado qaar iyo weydiiso dukaamada music, dukaamada dharka, dukaamada qaxwada, ama goobaha music degmadaada haddii aad halkaas tegi karo qaar ka mid ah dadka kale in ay qaataan. Ama weydii haddii aad ku dhejin kartaa qoraalka ah ee ay dukaanka. Meelaha intooda badan waxay leeyihiin guddiyada ogeysiisyada (I.E. Dugsiyada, meelaha dharka lagu dhaqdo, iwm) sidaa darteed waxaa aad u dhejin kartaa ilaa aad. Don ';t lumin warqado aad, dooran meesha ay ku boostada ama gacanta si taxadir leh. Isticmaal jir aad u wanaagsan oo dareen caadi ah!
Waxaan waxaad la xiriiri kartaa macluumaad dheeraad ah ama si aad u weydiiso su'aal ah? Sure! Just email noo soo dirto at teams@ianerix.com oo waxaan isku dayi doonaa in ay sida ugu dhaqsaha badan uga jawaabaan. Laakiin haddii aynu yihiin mashquul dhagaysiga muusigga Ian Erix, daawashada cajaladaha uu ama kumbuterka wejigiisa galay dhinaca Buur Rushmore, waxaan qaadi laga yaabaa in wax yar ka dheer in dib u hesho aad si!